दलान नेपाल : गच्छदारको नयां मोर्चाबन्दी - सम्भावित भाडभौलोको अर्को खतरा
गच्छदारको नयां मोर्चाबन्दी - सम्भावित भाडभौलोको अर्को खतरा
पहिलो संविद्यानसभाको विद्यटन पश्चात दोस्रो संविद्यानसभाको निर्वाचनको मिती घोषणा भईसकेको समयको कुरा हो । एक दिन चिया खानका लागी यो सवाददातालाई फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले वोलाएका थिए । एका विहानै भर्खरै मन्त्रीवाट पार्टीको वागडोर राम्ररी सम्हालन लागेका यादव काहा चिया खान पुगे । मधेशी पार्टीहरुको आन्तरिक कलहको कारण तत्कालिन रुपमा निर्वाचनको लागी मोर्चाको वैठक बसाउन पहल तीव्र रुपमा चलीरहेको थियो तर सम्भव भइराखेका थिएन । यादवसंग कुराकानीको सन्दर्भमा मैलै जिज्ञासा राखे आखिर बैठक समेत किन बस्न नसकेको ? तत्कालीन रुपमा मोर्चामा समेत सहभागी यादवले वडो खुलेर कुरा गर्दै भने, हेर्नुस कुनै शिर्ष भनाउदा अध्यक्षहरुलाई एक अर्कौ माथी विश्वास छैन । सवैले सबै माथी यती ठुलो आशंका गर्छन कि पुरै मधेशको राजनिती डमाडोल हुने अवस्थामा पुगी सकेको छ । उनकै शब्दमा महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार र राजेन्द्र महतो विचको आन्तरिक टकराव यती उच्च तहमा पुगी सकेको थियो बैठक बस्ने अवस्था नै थिएन । ठाकुरले सबै पार्टीहरु संग एकताको प्रस्ताव पेश गरेका थिए नभए निर्वाचनमा संगै जाउ भनेर सहकार्यको लागी आब्हान गरेका थिए । तकाालिन अवस्थामा उपेन्द्र यादव त्यो गेममा थिएन । यादव र ठाकुर विच एकिकरणको लागी छुटै केही असफल बैठकहरु बसेको थियो । राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक रुपमै ठाकुर र गच्छदारलाई मधेशका गद्धार घोषणा गरेका थिए । मैलै राज किशोर यादवलाई अर्को प्रश्न तेर्साए यी शिर्ष नेताहरु विच किन आखिर मनमुटाव ? उनले फेरी खुलेर हास्दै केही प्रसंगहरु सुनाए । उनले भने, विजय गच्छदार मलाई कहिले काही राती फिट भए पछि फोन गर्छन, उनी भन्ने गर्छन, हेर भाई त्यो वुढोलाई किन उनीहरु यती भाउ दिएको ? तिमीहरुले मलाई साथ दिनु पर्यो, त्यसलाई तह लगाउनु पर्छ है । वुढो भन्ने उनले ठाकुरलाई इकिंग गरेका थिए भने उनीहरु भन्नाले दक्षिणी छिमेकी शक्तिकेन्द्र । हिजो तिनै राजकिशोर यादव, गच्छदार र शरदसिंह भण्डारी विच छुटै नयां मोर्चाबन्दीको घोषणा गरिएको छ ।
गच्छदारले नयां मोर्चाको घोषणा गर्दै तीन दिने अल्टीमेटन दिदै आन्द्योलनमा जाने घुर्की दिएका छन । रोचक त के छ भने पुर्व देखिपश्चिम सम्मका पुरै मधेश आज तीन हप्ता देखि आन्दोलनको रापमा जल्दै छन । गच्छारले अर्को के आन्द्योलन गर्लान त्यो वुझि नसक्नु छ । तर एउटा कुरा विगतको केही तथ्यहरु संशय चाही पैदा गर्छन । आखिर गच्छदारको यो नयां मोर्चाबन्दीले के गर्लान ? उनी अहिले न सतापक्षमा न आन्द्योलाकारीको कितामा छन । उनी १६ बुदेका एक हस्ताक्षर कर्ता हुन । पछिल्लो ७ प्रदेशको खाकामा हस्ताक्षर नगरे पनि त्यसका एक सश्क्क्त प्रत्यक्षदर्शी हुन । तर स्वयंम उनकै पार्टीहरुका थारु अगुवाहरु पश्मिमा आन्द्योलित छन । पुर्वमा उनी स्वयंममा अप्ठायारामा छन । तर त्यसका लागी उनले मोर्चाकै घोषणा गर्नु पर्ने आवश्यकता दिएन । उनी पार्टीगत रुपमै निर्णय गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर मोर्चा घोषणा गरेर उनले मधेश भित्रै पनि अर्कौ एउटा शक्तिको रुपमा आफुलाई उभ्याउन देखाएको जस्तो देखिन्छ । ठाकुर, यादव र महतो नेतृत्वको मोर्चामा स्थान नपाए पछि यस अघि नै अनिल झा, मातृका यादव लगायतकाले छुटै अर्को मोर्चाको घोषणा गर्दै आन्द्योलनमै छन ।
आपसी मनमुटावको चक्रव्युहमा मधेशी नेतृत्व
आज मात्रै नवलपरासीमा आयो्जना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मधेशी मोर्चाका एक घटक सदभावा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफना दुई सहयात्रीहरु ठाकुर र यादवलाई चाकरी गर्न काठमाडौ गएको संगिन टिप्पणी गरेका छन । ठाकुर र यादव गएको मंगलवार पुर्वी मधेशका जिल्लहरुवाट कार्यक्रमहरु गरेर दुई दिनका लागी काठमाडौ आएका थिए । उनीहरु काठमाडौमा राजननितीक नेतृत्व देखि विदेशी कुटनितीज्ञ सम्मलाई भेटेघाट गर्न भ्याए । भोली विहिवार सिरहाको मिर्चैयामा मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागी हुन दुवै जना आज जनकपुर पुगेका छन । तर महतोले त्याहा सहभागी नहुने जनाइसकेका छन । महेन्द्र यादव आज विहान काठमाडौ आइपुगेका छन । कतिपय भित्रियाका अनुसार गच्छदारले नयां मोर्चाका् घोषणा गरे पछि महेन्द्र यादवलाई उनले नै काठमाडौ डाकेका छन । केही समय अघि गच्छदार महेन्द्र यादव विच एकिकरण हुने चर्चा व्यापक रुपमा चलेको थियो ।
यसरी मधेशमा आन्द्योलन चर्किएर उच्चतम विन्दूमा पुगीको वेला सबै मधेशी नेतृत्वहरु आ आफना तालले गतिविधीहरु गर्दै अघि वढीरहेको देखिन्छ । जानकारहरुको बुझाईमा वर्तमान आन्द्योलन मधेशी पार्टीहरुको आकंलन भन्द्या भिन्न रुप्मा उठन पुगेका कारण उनीहरु विच पनि सामन्यजस्ता देखिन्न ।
प्रमुख चार दल विच १६ बुदे सहमती भए लगतै मधेशका केही अगुवाहरुको पहलमा मधेशमा सक्रिय सवै पक्षहरुको संयुक्त रुपमा बृहत मोर्चा बनाउने कसरत गरेका थिए । जसमा अनिल झा देखि जेपी गुप्ता हुदै मातृका यादव सम्मलाई समे्टेर अघि वढने कुरा भएको थियो । त्यही अभ्यास चली नै रहदा यी सबै पक्षहरुले काठमाडौ स्थित भारतीय राजदुतलाई संयुक्त रुपमा भेटन पनि गएका थिए । तर नेताहरुको आ आफना स्वार्थका कारण त्यो पनि त्यतीकै फासफुस भयो । उक्त अभियानमा लागेका केही अगुवाहरुको भनाई उपेन्द्र यादवले जेपी गुप्ता र मातृका यादव, राजेन्द्र महतोले अनिल झा संग सहकार्य गर्न नसकिने जनाए पछि त्यो प्रयास असफल भएको थियो । तर नयां ंसंविद्याँनको खाका प्रति मधेशमा यती ठुलो असन्तुष्टि थियो कि मोर्चाका नेताहरुले त्यसलाई थाम्न त के, आकंलन समेत गरेका थिएन ।
६ प्रदेशको सिमांकन विरुद्ध सुरुमा थारु आन्द्योलन प्रति समर्थन जनाउदै दुई दिने मधेश बन्दको घोषणा गरेको मोर्चाले स्थानिय तहवाट अनिश्चिातकालिन बन्द्य नगरे आफुहरु स्थानिय स्तरमै घोषणा गर्ने थ्रेट पाए पछि अघि आउन वाध्य भए । त्यसको दुई दिनमै भारदह घटना हुन पुग्यो । त्यस पछि हतार हतारमा मधेश झरेका नेताहरु भारदह वाहेक अन्य कुनै पनि ठाउमा एक चोटी पत्रकार सम्मेलन समेत गर्न सकिरहेका छैन । आन्दोलनमा ठाउ ठाउमा हिसांत्मक घटनाहरु वढदै गइरहेको सन्दर्भमा र त्यसलाई उचित व्यवस्थापनको पक्षमा हेरी कतै चुक्ने त होइन भन्ने आशंका विभिन्न कोणहरु वाट भईरहेको देखिन्छ । कतिपयको बुझाईमा त्यही विन्दूमा गच्छदारको नयां मोर्चाले नयां भाडभैलो गरेर जसरी पनि जस पाउने वाटोमा जान सक्छन । अनि वास्तविक आद्योलनको व्यवस्थापन थप कमजोर हुन सक्छ ।